ISPO Munich Jan.26 ukuba Jan.29, 2020, Siyakwamukela idokodo lethu C6.431-6
Emuva & Intamo Ukusekela
Yoga Amasokisi, Izikhwama & Abanye
ISIVIVINYO & NOKULUNGELA
A Brief Isingeniso Of Ithimba lethu
Sibheke R & D nethimba lethu njengoba amandla ethu asathuthuka, sihlale ukubeka 10% inzuzo net ku-R & D, sifunani ku emakethe nekuhlatiya mkhuba emakethe, okudala eziningi umqondo, sithatha ezinye ukuxhumana namakhasimende ethu professional emhlabeni Umhlaba. Ezinye umqondo bavumelana iyoba design dweba, ukuxhumana ngokuphindaphindiwe ......, ekugcineni umdwebo is eyenziwe R yethu & D Ithimba, elandelayo ukwenza isampula sokugcina, Sibe sesiya olandelayo isinyathelo- "Ukwakha"
Sine izimboni zethu siqu okuyinto enza Hula Hoop, Intamo futhi Emuva ukwesekwa kwemikhiqizo, Acupressure Imikhiqizo Ukuzindla Imikhiqizo e Ningbo, Uma esisitholile oda ezivela kumakhasimende ethu, yokuthengisa yethu umuntu ngeke reconfirm yonke imininingwane namakhasimende ethu. Ngemva kwalokho, Factories uzokwenza amasampula Oku-Production ifektri uzoqala ekukhiqizweni lapho kuhlolwa amasampula e PP kuqinisekisiwe. ifektri akhiqize izimpahla okuvumelana ISO9001 indlela yokuphathwa kwamazinga 2008, Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana nohlelo lwethu lokulawula izinga, Hamba isinyathelo esilandelayo - "ukulawula izinga"
ukulawula izinga yethu uhlelo lihlukana ku 3 parts- impahla ukulawula izinga (ukuhlolwa ngaphambi kokuya endlini yempahla zethu ezibonakalayo noma ngaphambi ukukhiqizwa), ukulawula izinga ngesikhathi ekukhiqizweni nekhwalithi ukuhlolwa emva ukukhiqizwa. ukulawula yethu izinga base ku ISO9001 indlela yokuphathwa kwamazinga, sokusampulwa wokuhlola ngokuvumelana AQL (Ukwamukelwa Quality Umkhawulo) 2.5 amazinga. QC yethu izokwenza ukuthi imibiko ukuhlolwa oda ngalinye. Emva amakhasimende kokuhlola imibiko ukuhlolwa futhi baqinisekisa, Sizokwenza ngomkhumbi izimpahla.
Lokumaketha engcono kakhulu ukuthola 'izidingo zangempela futhi ukuthola imikhiqizo ethandwa emakethe kumakhasimende ethu, ukumaketha Ithimba lethu kanye R & D Ithimba abasebenza ndawonye njalo ukwenza imikhiqizo ezintsha ukuhlangabezana amaklayenti sokugcina' amaklayenti lokugcina izidingo. yokuthengisa yethu umuntu uyohlale ulandele umqondo ezintsha kanye nemikhiqizo evela ukumaketha ithimba lethu futhi R & D Ithimba futhi ibenze imikhiqizo emisha kanye nemikhiqizo ethandwa kumakhasimende ethu, Thina ukugxila professionalization futhi inkonzo umoya, enjalo njengoba sisebenzisa abaluncela ukukhonza amakhasimende ethu . Sicabanga a ukukhulumisana okuhle kuyisici impumelelo nengxenye.
Sibheke konke ukuthunyelwa endaweni eqala zohlelo olusha. Ngemva izimpahla ngomkhumbi out, Sizokwenza ukulungiselela yonke imibhalo amakhasimende eyolanda izimpahla ngokushelela, Ukusiza amakhasimende ukuthi eyolanda izimpahla uma kudingeka. Sizothumela "ifomu eyanelisayo" ikhasimende emva kwezinsuku ezimbalwa. Sibheke "Amakhasimende lokuqala, Inkontileka umoya futhi credit lokuqala" njengoba izimiso zethu base on ukulingana Mutual, Ukuhloniphana kanye nekuzuza.
A emfushane isingeniso lemikhiqizo
Sha "NEH" lakhiwa 2005, Isimiso ukulakha brand "NEH" base ku Yemvelo (Organic), Eco friendly futhi Health. Sha "NEH" kuthatha uhlamvu lokuqala Zesayensi Ezingesilo iqiniso, Eco friendly futhi Health. Esisinikela ukuklama nokwenza Zesayensi Ezingesilo iqiniso, Eco nobungane imikhiqizo yezempilo for amaklayenti ethu.
Sha "SCMO" futhi igama lenkampani, ingabe laklanywa ngokuvumelana China ifilosofi "Theory izakhi emihlanu" futhi "Fengshui", SCMO Chinese kuyinto "xun Mu", Igama elithi "xun" ngesiShayina ukuthi ingahamba kuyo yonke indawo ezweni umsebenzi wabo, futhi sithunywe ukuba usizo wonke umuntu ngaphezulu enempilo, igama elithi "Mu" ngesiShayina wukuthi kufanele sisebenze kanzima, knowhow usuku ngalunye, Ngakho SCMO (Xunmu) wukuthi kufanele sisebenze kanzima, knowhow usuku ngalunye ukuze basize zonke umzimba kakhudlwana enempilo.
With ukuthuthukiswa ubuchwepheshe isayensi, Izwe baba ezimibalabala ngaphezulu ensimini impahla kunangaphambili, I izinto zashintsha emikhakheni eminingi, Iningi labantu sengisilethe eziningi izinzuzo kusukela ohlangothini ngokomzimba, Nokho, Kuyinto ukungalingani phakathi ecaleni ngokomzimba nengqondo & umphefumulo izinhlangothi. Sha BESELF Yakhiwa ukudweba nokuthuthukisa imikhiqizo okuhlobene usizo kubantu ukuze uthole ibhalansi phakathi ecaleni ngokomzimba nengqondo & umphefumulo izinhlangothi.
MAGIC EMUVA UXHASO
With ukuthuthukiswa IT, Yikuphi washintsha kakhulu ukuziphatha kwabantu abasebenza ukuthi ahlale time.A eside isikhathi eside bayiphendule kuletha inkinga isikhwama emgogodleni yethu, Ngokuvamile siyaba naso ongaphakeme iqolo nobuhlungu entanyeni, Lokhu ubuhlungu chronic kusongela ukuphila kwethu kangcono, esisinikela usizo kubantu ukuze zithuthukise izimo zabo, Yileso isizathu sha "ukwesekwa magic emuva" lakhiwa 2011.Now sha "magic emuva ukwesekwa" ibhalisiwe e-China, i-US ne-EU
Umqondo "Eco friendly" kuyinto izimiso wethu ukwakha imikhiqizo nokwenza kokwakho kwemikhiqizo kanye ukwakha izibopho zethu. Ngo-2010, Kube amaphilisi okunciphisa eyayintula emibi umphumela. Saqaphela khona Kwaba yithuba elihle kakhulu kithi ukusunduza yethu detachable ISIGODI ayindilinga, Abantu njalo wathi "isisindo ukulahlekelwa, Yokusebenzisa ISIGODI ayindilinga", Sisanda sengisilethe okuthile kuwo, Ngakho sakha sha "Isisindo Hoop" ngoba ISIGODI yethu ayindilinga .Manje ayindilinga isisindo ibhalisiwe e China, US kanye EU
A emfushane isingeniso ithimba lethu
Research & Development Sibheke R & D nethimba lethu njengoba amandla ethu asathuthuka, We njalo sibeke ku-10% inzuzo net ku-R & D, Sibuka emakethe nekuhlatiya mkhuba emakethe, Yikuphi edonsa eziningi umqondo, Thina sithathe ezinye ukuxhumana namakhasimende ethu professional emhlabeni world.Some bavumelana umqondo iyoba design dweba, ukuxhumana ngokuphindaphindiwe ......, ekugcineni umdwebo is eyenziwe R yethu & D ithimba, elandelayo ukwenza isampula yokugcina, ke siye isinyathelo- olandelayo "Ukwakha"
Sine izimboni zethu siqu okuyinto enza Hula Hoop, Intamo futhi Emuva ukwesekwa kwemikhiqizo, Acupressure Imikhiqizo Ukuzindla Imikhiqizo e Ningbo, Uma esisitholile oda ezivela kumakhasimende ethu, yokuthengisa yethu umuntu ngeke reconfirm yonke imininingwane nobuhlobo namakhasimende ethu, Emva kwalokho, Factories kuthanda ukwenza Oku-Production amasampula ifektri uzoqala ekukhiqizweni lapho kuhlolwa amasampula e PP kuqinisekisiwe. ifektri akhiqize izimpahla okuvumelana ISO9001 indlela yokuphathwa kwamazinga 2008, Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana nohlelo lwethu lokulawula izinga, Hamba isinyathelo esilandelayo - "ukulawula izinga"
Imibuzo Evame Ukubuzwa lenkampani
Yiziphi imikhiqizo yakho main & izimakethe?
Imikhiqizo yethu eziyinhloko ISIGODI ayindilinga, acupressure mat, lumbar imishini yokwelapha nokuzindla isiguqo. Sine isipiliyoni engu-10 'e yokukhiqiza uthumela mikhiqizo. Imikhiqizo yethu kanye namasevisi othembekile nge amaklayenti esuka eYurophu, eNyakatho Melika, e-Oceania neNingizimu Korea, ngubani ikakhulu kukhona abaphathi esitolo, abathengayo professional wokuqeqesha kanye nezempilo emkhakheni, futhi Amazon zitolo.
Uyini ubuningi ubuncane ukuthi angikwazi oda?
MOQ kuxhomeke kulokho imikhiqizo wena anentshisekelo. Ngokuvamile, 50-100pcs / umbala ngamunye imikhiqizo yethu eyinhloko asebenzayo, uma ngokwezifiso womniningwane ayiyona inkimbinkimbi. Sizozama konke okusemandleni ethu ukuze asekele amaklayenti ethu izinzuzo mutual.
Hlobo luni emaphaketheni eniwenzayo? & Singakwazi yini oyifisayo?
emaphaketheni Standard kuyinto ilebula + incwadi yeziyalezo + umbala ebhokisini (noma imeyili ibhokisi) + ibhokisi ibhokisi. Kungaba okuhlukile okusekelwe izimfuno zakho. umklami wethu wezokusebenza ziyonikela ongakhetha eziningi kanye nemibono emisha mayelana lokugoqa.
Kungenzeka yini nawe Ukuhlinzeka ibhuku yonke imikhiqizo yakho?
Yebo. Sine izinhlu imikhiqizo eliyinhloko. Siyajabula ukuba akuthumele lamacatalog PDF noma isithombe format nge e-mail noma izinsiza zokuxhumana nabantu emoyeni.
Ingabe unikele bhukwana imfundo ye indlela ukusebenzisa umkhiqizo?
Yebo. Singanikela kwencwadi instrucion ngolwazi umsebenzi wayo, ukusetshenziswa, kanye ukwenza sika lwemithetho yonke imikhiqizo yethu.
Singakwazi yini oda eyodwa noma ezinye imibala ngokwezifiso?
Yebo. Sine ezinye imibala kufanele kukhethwe futhi sizokubonisa ongakhetha. Singasho futhi ngezifiso umbala entsha ngawe. Vele usitshele inombolo Pantone noma usithumelele isampula umbala.
Ziyini izindleko isampula?
Siyajabula ukuba uyinikeze khulula isampula njalo ngawe ngenkathi kufanele akhokhele yizimpahla kanye amasampula ezengeziwe. Imali eyengeziwe lizokhokhiswa isampula ngezifiso ngenxa kudingeka senze ibhodi ifomu zokunyathelisa. Ungakhokha ngokusebenzisa PayPal noma amaShayina Alipay okukhethekile futhi WeChatPay. Ngokuqondene nesikhathi kwezidingo, sicela uthole ishidi ngezansi.
Ukuthumela endaweni Isikhathi Delivery ngu express
i-America esenyakatho 2 ~ 3days
I-Asia 2 ~ 3days
Sifuna i-GOTS eqinisekisiwe ukuzindla isiguqo, unayo ke?
Yebo. ukuzindla kwethu isiguqo lidlule izitifiketi GOTS. Yonke imikhiqizo yethu eyenziwe impahla akunabo ubuthi. Ukuze yonke imininingwane izitifiketi sicela uthole ishidi ngezansi.
Imininingwane isitifiketi ogunyaziwe yephathenti
embonini yethu GOTS, BSCI, ISO9000
imikhiqizo yethu ISIGODI ayindilinga CE, REACH, RoHS, Azo, EN71,6P yebo
acupressure uhlaka CE, RoHS, EN957, REACH yebo
magic emuva ukweseka CE yebo
ukuzindla isiguqo RoHS, EN71, GOTS
Kuyoze kube nini yisikhathi ukukhiqizwa nesikhathi lokuthumela nge-oda ngalinye?
Sibuyekeze ukukhiqizwa line yethu okuzenzakalelayo ISIGODI ayindilinga futhi acupressure uhlaka okuyinto kakhulu sifushanise isikhathi ukukhiqizwa izinsuku ezingu-15 ngenxa yesizathu esisodwa 40HQ esitsheni. Ukuze uthole ezinye imikhiqizo esezingeni ukukhiqizwa phambili isikhathi imayelana nezinsuku ezingu-20.
Destination port Isikhathi Delivery ngemikhumbi
i-America esenyakatho 30 ~ 50days
I-Asia 7 ~ 15days
Kuyini lokukhokha eside yakho?
eside yethu evamile yokukhokha T / T-30% njengoba idiphozi, 70% ngokumelene B / ikhophi L.
Ingabe unikeze nganoma iyiphi isevisi?
Sine a professional futhi abanothando izithombe ithimba nge photostudio esikhulu Equipments eziphambili esiza sihlinzeke izinhlelo asekelayo like isixazululo eliphezulu isikhangiso isithombe, imodeli izithombe namavidiyo ku-amaklayenti.
Thintana nathi mayelana nebhizinisi noma nomkhiqizo eziklanyelwe wena! Xhumana nathi
IHHOVISI: 1502, Ningshing Isakhiwo, 666 Full RD, Yinzhou District, Ningbo, China
FACTORY: No.13, Xinheng Yi RD, Private Imboni Zone, Jiangbei District, Ningbo, China
Magic Emuva Ukusekela
© Copyright - 2009-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe.